Rabada uyibeke bucala iAustralia
Kagiso Rabada ulikhokhele kakuhle iqela lakhe iStandard Bank Proteas apho ebechola uthinti ka Mitchell Marsh ngebola yokugqibela yosuku kwacaca apho ubheka khona lomdlalo xa kusiyiwa kusuku lokugqibela eSt Georges Park ngomvulo, iProteas ziwuphumelele lomdlalo namhlanje no phakathi kwabo ne Australia bebabetha ngothinti abasixhenxe.
Rabada uyewongeza abathathu namhlanje iProteas zajongana netyala lekhulu elinanye.
uRabada ugqibe namanani 6/104 ezicholela othinti abalishumi okwesine kwimidlalo vavanyo kwaye ungemva ngetyeli elinye ku ka Dale Steyn.
Usenokuguqula amakhasi lomfo atshintshe izibhalo ophule namacwecwe kwincwadi zalapha ekhaya ngoba lomfo uneminyaka engamashumi amabini anesibini ubudala enemidlalo engamashumi amabini anesibhozo ayidlalileyo.
Unothinti abangamashumi amathathu kwimidlalo emihlanu kulonyaka kwaye yi 10-fer yakhe yesibini kule season.
Ledyongwana iyeyawongwa ngembasa ye Sunfoil Man of the Match ngamanani 11/150 nangona belikhona ikhulu azenalo uAB De Villiers.
Eyonanto eliqela abanokuyijonga kulimdlalo kukubaluleka kwegalelo lamadoda anamava, uDe Villiers no Rabada bayenzile lonto.
Lamaqela azakudibana ePPC Newlands kumdlalo wesithatu ngolwesine kwiveki ezayo ze owokugqibela bawudlale eRhawutini kwibala iBidvest Wandarers nge mpela veki yepasika.
Rabada ulibeke ngentla iqela lakhe Du Plessis ufuna iqela lakhe lizithethelele ngomdlalo wabo Faf uyazingca ngeqela lakhe nangona bebethiwe Australia phumelele umdlalo wokuqala Maharaj uzikhelele kumdlalo wakhe wokuqala eKingsmead Du Plessis uzakudlala kwidabi abajongenenalo Proteas ne Australia balungiselela elona dabi MORNE MORKEL UZAKUHLALA PHANTSI EMVA KOKHUPISWANO NE AUSTRALIA INDIA ILISONGILE UTYELELO LWABO Australia phumelele umdlalo wamalungiselelo Du Plessis ulibeke ku Elgar ithemba